Soo-saareyaasha Mashiinnada Rotary, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Warshad Rotary Machines
Mashiinka Kaydadka Tattoo K2 Revolution
Mashiinka aan xudunta lahayn ee Jarmalka 25x22mm Xawaaraha Wareegga: 12V 11000rpm Xuddunta: 420g Faahfaahin Degdeg ah Muuqaalka: Nooca Joogtada ah: Tattoo Gun Waxyaabaha: Nooca Qoriga Aluminium: Meesha Korantada ee Asalka ah: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: K2 Nambarka Qaabka: MDJ-166 Magaca wax soo saarka: K2 Revolution Isdhaxgalka Mashiinka Kaydadka: RCA Motor: Jarmalka Coreless Motor 25x22mm Xawaare: 12V 11000rpm Muddada Cirbadda La Qaadi Karo: 0.1-4mm Xirxirida: 1pc / sanduuqa Miisaanka: 0.6kg Midab: Casaan, Madoow, Faa'iidada Dahabka: Xasilooni u Isticmaal: Tattoo Sideen ku dalbadaa muunad ...
Mashiinka Kaydadka Tattoo 3 KingKong
Xawaaraha Gawaarida Gawaarida Jarmal: 12V 11000rpm 480 torque weyn AIR FREIGHT: Habka ugu fiican ee loo raro shixnadaha dhexdhexaadka ah (in kabadan 100kg) ama marka waqtigaaga uusan sugi karin xamuulka badda. Qiimaha xamuulka hawada wuxuu ku saleysan yahay miisaanka iyo mugga. Waxyaalaha qaarkood sida xumbada waxay qaadataa boosas fara badan laakiin waa mid aad u fudud oo waxyaabaha qaar sida birta ayaa aad u culus laakiin waxay qaadataa meel yar. Kharashka xamuulka ee rasmiga ahi miisaan iyo mug ayuu u qaadanayaa labadaba. Guud ahaan, waqtiga ku-meel-gaadhka ahi kama badna 10 shaqo d ...
Mashiinka Kaydadka Tattoo-ga IPHISE
Xawaaraha Gawaarida Gawaarida ah: 9000rpm Cirbadda Dheeriga ah ee La Qaadi Karo: 0 - 3.5mm 1. Mashiinka aan caadiga ahayn, xawaaraha 12/9000 wuxuu si hufan u dammaanad qaadayaa xasilloonida mashiinka, xooggu waa xoog badan yahay: 2. Dhaawac maqaarka oo hooseeya, buuq yar, midabeyn dhakhso leh, shaqo kulul uma dhaxeyso! Jidhku wuxuu ka samaysan yahay aluminium duulimaad; waa sax sax ah oo lagu farsameeyo aaladda mashiinka CNC oo ah shan-dhudhun si loo hubiyo kaamilnaanta jirka iyo saxnaanta cabirka! 3. Dusha sare ee fuselage waa muraayad lagu safeeyey oo lagu subkay ...
Mashiinka Rotary Tattoo Rotary (Mashiinka aan caadiga ahayn)
Miisaanka saafiga ah: Mashiinka kaliya: 85g culeyska guud: 170g Cabir: Mashiinka kaliya: 50x52x33mm (oo ay kujirto dhererka ulaha 91mm) Faalig: Waxsoosaarka cirbadda ugu badan 4mm xirxirida: sanduuqa daboolka kore iyo kan hoose Midabka: 7 midab oo casaan-buluug-dahab-qalin-casaan ah Liiska qaabeynta midab-buluug-cagaaran: mashiin * 1 ul timir ah * 2 xirmo yar oo siyaado ah * 1 Ikhtiyaar: xakamaynta iyo siligyada Halbeegyada: 1. Isdhaxgalka: Iskuxirka RCA 2. Waxyaabaha: Aluminiumka aluminium 3. Geeddi-socodka: Xardho isku-dhafan ee CNC isku-dhafan 4. Mashiinka: Aan lahayn matoor 5. Kordhinta danab: 4-5v ...
Mashiinka Kaydadka Tattoo ee Shisheeyaha (Baabuur Aan Xad Laheyn)
Miisaanka saafiga ah: hal mashiin: 74g oo lagu daray xamili: 170g Miisaanka guud: hal mishiin: 170g oo lagu daray xamili: 280g Cabbirka: Mashiinka kaliya: 35 * 63 * 110 (dhererka tiirka) mm oo lagu daray xamili: 133 * 35mm Qiyaasta xajmiga: 83.8 * 30.5mm Xirxirida: sanduuqa daboolka kore iyo hoose Midab: 6 midab madow-casaan-dahab-guduud-qalin cawl-shaamagne Liiska qaabeynta: mashiinka * 1 usha gudbinta * 3 xirmo yar oo siyaado ah * 1 gacan qabasho (ikhtiyaari ah) Halbeegyada: Wajahadda: RCA interface 2. Waxyaabaha: Aluminium Aluminium 3. Farshaxan: CNC isku dhafan oo sax ah xardho 4 ...
Mashiinka Kaydadka Tattoo ee KingKong 2
Baabuur: Xawaaraha Gawaarida Gawaarida ee Mareykanka: 12000rpm Cirbadda Dheeriga ah ee La Qaadi Karo: 0.1 - 4mm isku xira DC, hagitaan weyn. Xawaare sare iyo awood xoog leh, tayo sare leh. Awood deggan, ma aha kuleyl 8 saacadood ka dib shaqeynta. Buuq yar, oo siinaya jawi aamusnaan ah farshaxanada iyo macaamiisha tattoo. Sidee qiimeyntu u shaqeysaa? Inta badan ee aad dalbato ayaa ka hooseeya qiimaha aad awoodi doonto inaad hesho. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay alaabada OEM / ODM maxaa yeelay iyaga ayaa KELIYA loo sameeyay. Dhamaan horumarka, nashqadee ...
Mashiinka Rotary Shell Tattoo
Tayada Weyn ee 9V 12000rpm Tattoo Mashiinka DC Interface Germany Faulhaber Motor Shell Tattoo Rotary Mashiinka Mashiinka: Mashiinka wuxuu leeyahay meel banaan oo aluminium ah oo aluminium ah oo la soo saaray oo leh isha iftiinka LED marka la hawl galiyo iyo meel la rogi karo, bumpers dhinac la isku beddeli karo iyo daboolka kamaradda. Mashiinkaani wuxuu kaloo adeegsadaa qalab cusub oo lagu xakameynayo torsion qalabkiisa oo leh seddex baarar riixitaan - jilicsan, dhexdhexaad ah iyo adag. Astaamaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah xasaasiyadda aan-kala-go 'lahayn iyo dib-u-dhaca bilawga ah. Mashiinka wuxuu leeyahay billet al ...